>အမေများနေ့ (ပြာသိုလပြည့်နေ့) | Myanmar Collection
← >Gmail Account Locked ကျသွားရင် ဖြေရှင်းနည်း
>BarCamp Yangon 2011 ကျင်းပရေးအတွက် →
ဘာလိုလိုနဲ့ ပြာသိုလပြည့်ပြန်ပြီနော်။ အမေများနေ့လို့ မှတ်မိထားတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့မှာ ဖေဖေနှင့် မေမေက အဘိုးအဘွားအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူပြုလုပ်ပေးခဲ့သလို ကျွန်မကလည်း အမေများနေ့ကို မှတ်မှတ်ရရ ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။
လွန်တာမိရင် မာတာအဟံဝန္ဒာမိပါ အမေအမေဆိုတာသားသမီးများအတွက်မျှဝေခံစားသက်ဖူးအကာ လက်ဦးဆရာပါအမေ
ကျွန်မအမေအားလုံးရဲ့အမေအမေမှန်ဘိ၊ ဆင်ခြင်ကြည့်လျှင်မရှိမဖြစ် ခွန်အားဖြစ်ပွားကြီးကျယ်ခမ်းနား သမုဒ္ဒရာပင်လယ်သားသမီးတို့ရဲ့ ရှေ့ဆောင်ဂုဏ်ရှိန်သြဇာ စဉ်ထွန်းပြောင်မျက်နှာသာကြည် လရောင်ပမာအမြဲရွှင်ပြုံးကောင်းဆိုးကိုပင် ကြံ့ကြံ့ခိုင်၍မမှောင်အလင်း အရောင်ဆင်းနဲ့မှားခြင်း မှန်ခြင်း အမြင်ရှင်းအောင်ကောင်းခြင်းပေးဝေ အို… အမေသက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ….
အမေ့အပြုံး အမေ့ပီတိအမေသည် သားသမီးများအတွက် မီးရှူးတစ်ဆောင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမေမရှိလျှင်သားသမီးလည်း မရှိနိုင်ပေ။ အမေသည်သာ သားသမီးများအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမိခင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားစဉ်အခါကတည်းက အမေသည်ပျော်တစ်ပြုံးပြုံး။ “၀ါး… အူဝဲ“ ဟူသော အသံသည် သေမင်းနှင့်စစ်ခင်းနေသော အမေ့မျက်နှာအား အပြုံးရိပ်သမ်းသွားသည်။မပီကလာ ပီကလာနှင့် “အမေ“ ဟု စခေါ်လိုက်သော သားသမီးရဲ့အသံ ကြားကြားချင်းတအံ့တသြပြုံးလိုက်သူမှာ အမေဖြစ်သည်။ သားသမီးက အမေ့နို့ကိုစို့ရိုတင်မဟုတ်၊ သူ့သွားဖုံးလေးနဲ့ ဒါမှမဟုတ် သူ့သွားလေးတွေနဲ့နာနာကျင်ကျင်ကိုက်နေတာကို အမေက ပြုံးပြုံးကြီးလုပ်ပြီး ပီတိဖြစ်နေတတ်သည်။သူ့သားသမီး ငုတ်တုတ်စထိုင်တဲ့နေ့၊ လေးဘက်သွားတဲ့နေ့၊မက်ရပ်စမ်းရပ်တဲ့နေ့၊ လမ်းလျှောက်တဲ့နေ့တွေမှာ အမေ့မျက်နှာပေါ်ကအမေ့အပြုံးကို ဘယ်ပန်းချီမှ ရေးလို့မမီနိုင်ပါ။သူ့သားသမီး ၀လုံးလေး စရေးပြတတ်တာကို မပြည့်စုံတဲ့ နွမ်းပါးနေသည့်အမေဖြစ်စေ၊ ပြည့်စုံကြွယ်ဝမင်းစိုးရာဇာဖြစ်နေသည့် အမေဖြစ်စေသူ့သားသမီးပညာတတ်ကြီးဖြစ်မယ့် နိမိတ်လို့ ယူဆပြီး ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပြုံးနေတဲ့အမေ။အမေ့သားမောင်ရင်လောင်း၊ အမေ့သမီး သီလရှင်လောင်းကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေတဲ့အမေ့အပြုံးကို ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မေ့၍ ရမည်မဟုတ်။ သားသမီးတွေဘွဲ့တွေ ဂုဏ်ထူးအောင်မြင်မှု အထူးထူးကို ရယူတဲ့နေ့၊ အမေတစ်ယောက်သူ့အပြုံးကို အစသတ်၍ မရတတ်။သားသမီးတွေအတွက် မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာ ညွှန်လတ်၊ အတတ်သင်စေ၊ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းလျှင် ၀တ်ငါးအင် ဆိုသည့်မိဘ၀တ္တရားငါးပါးအား ဆောင်ရွက်နေရချိန်တိုင်း အမေက ပြုံးနေတတ်သည်။ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့် အမေ့ကို အမေ ပင်ပန်းနေလားဟင် ဟု မေးကြည့်ပါ။ အမေကမမောမပန်း မပင်ပန်းတဲ့ အပြုံးကို ပြုံးပြနေလိမ့်မယ်။ သားသမီး ဆိုးသည်မိုက်သည် ရက်စက်ပြုမူ လိမ်ညာနေလည်း အပြုံးမပျက် မေတ္တာဖက်လျှက်အချစ်ပိုနေတာလည်း အမေ။ကျွန်မလည်း ဆိုးပါသည်။ သမီးပြန်လာမှ ထမင်းစားတတ်တဲ့အမေ့အပေါ်ပြန်ချိန်မမှန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ ဆိုးနေလျှက်ပါပဲ။ မိုးလင်းရင်အလုပ်သွားဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပေးတာလည်း အမေ။ သမီးခေါင်းမှာ ပန်ဆင်ဖို့ခရေပန်းကောက်ပြီး သီပေးနေတာလည်း အမေ။ ခုဆောင်းရောက်တော့လည်း မနက်ရေချိုးဖို့ ရေနွေးကြိုပေးတာလည်း အမေ။ အလုပ်သွားဖို့ထမင်းချိုင့်ထည့်ပေးတာလည်း အမေ။ အားလုံးရဲ့အမေ။ ကျွန်မရဲ့အမေ ဒီအမေဒီရင်ခွင် နွေးထွေးစွာနေထိုင်ရင်း မပျောက်မကွယ်အမြဲခိုလုံခွင့်ပေးလျှက်ပါ အမေ။(အမေ့များနေ့မှာ ဒီစာစုနဲ့ မေမေနှင့် ဖေဖေကို ကန်တော့လိုက်ပါတယ်)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.	← >Gmail Account Locked ကျသွားရင် ဖြေရှင်းနည်း